बलियो-इरादों विजय: शब्द र महत्वपूर्ण म्याचको सार
बलियो-इरादों विजय यो फरक खेल मा एक दुर्लभ घटना हो। टोलीमा बलियो-इरादों विजय हासिल गर्न धेरै बलियो वर्ण र लगनशील भई लागिरहेमा देखाउन पर्छ, इच्छा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न, के मई आउनुहोस्। यी खेल व्यक्तिगत प्रदर्शन गर्ने को अक्सर प्रकट नेतृत्व गुण र एक सम्पूर्ण रूपमा सामूहिक आत्मा को शक्ति मा।
फुटबल बलियो-इरादों विजय - यो के हो?
शायद टाढा खेल बाट मानिसहरूले तुरुन्तै अवधि बुझ्न सक्छ। तथ्यलाई कहिलेकाहीं टोली, एक इच्छा गर्न भनेर जीत शक्ति र जब स्कोर0थियो छ: 0। उदाहरणका लागि, तपाईं यो लडाइँमा फ्रान्स र अल्बानिया टोली बीच यूरो 2016 को दोस्रो राउन्ड सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। 90 मिनेट खर्च बराबर राखिएको सम्म, हुनत फ्रान्सेली एक महत्वपूर्ण फाइदा छ। STOPPAGE समय मा, यूरो finalists भविष्य घर दुई अनुत्तरित लक्ष्य स्कोर गर्न सक्षम थिए। तर यो एउटा बलियो-इरादों विजय छैन!
WINS टोलीमा पहिलो छुटेका गर्दा मात्र यस्तो खेल अवधि को प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। उदाहरणका लागि, यूरो 2016 अघि रोमानिया र युक्रेन को राष्ट्रिय टोली बीच एउटा अनुकूल खेलमा Romanians खाता म्याच को 22nd मिनेट खुलेको छ, तर अन्त मा, युक्रेनी खेलाडीहरूलाई4जित्यो: 3।
प्रमुख टूर्नामेंट को फाइनल बलियो-इरादों विजय
फुटबल मा सबै भन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो:
यूईएफए कप (यूरोपा लिग)।
विश्व फुटबल को इतिहास बलियो-इरादों विजय संग धेरै मेल खाने प्रशंसक दशकसम्म सम्झना र जवान sportsmen चरित्र शिक्षाको लागि एउटा उदाहरण रूपमा उद्धृत गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
अर्जेन्टिना र Uruguay बीच 1930 विश्व कप फाइनल, सम्झनुहोस्। को पाठ्यक्रम, म्याच को सहभागीहरू, र अन्तिम उपस्थित जो प्रशंसक, अब जीवित छ, तर यो अन्तिम मा पहिलो गम्भीर फिर्ती थियो। पहिलो म्याच मा Argentines को रन खोल्न र पहिलो पटक जित्यो - 2: 1। फुटबल प्रशंसक पहिलो च्याम्पियन Uruguayans थिए राम्ररी थाह छन्। दोस्रो आधा तिनीहरू तीन पटक आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी को गेट मारा र4जित्यो: 2।
च्याम्पियन्स लिग 1998/1999 कारण "Bavaria" संग पहिलो सेमिफाइनल मा खराब भाग्य को कुल गर्न प्ले गरे जो को अन्तिम "डायनेमो" Valery Lobanovsky, शायद 23-25 वर्ष सम्झना, सबै प्रशंसक। अगाडि, "Bavaria" मारियो पर्खाल आसपास 6th मिनेट निःशुल्क किक सुन्दर स्ट्रोक स्ट्रोक मा BASLER। गोल रक्षक "म्यान्चेस्टर युनाइटेड" एडविन वैन der SAR झटका प्यारीसाउन्ड सकेन। सर एलेक्स धेरै म्याच भर आक्रमण छ तर पौराणिक स्कोर गर्न सकेन Oliver Kahn। Decoupling 90 + 90 + 1 र3आए (अर्थात्, दोस्रो आधा, समय को लागि क्षतिपूर्ति) Ole Gunnar Solskjaer र जब टेड्डी Sheringham दुई पटक कोण खुवाउने पछि गोल गरेका थिए।2को एक स्कोर संग "संयुक्त" को विजय: 1 सधैंभरि फुटबल प्रशंसकको हृदयमा रहनेछ।
2005 मा, वहाँ एक थप भारी बलियो-इरादों विजय थियो। च्याम्पियन्स लिग अन्त्यमा हामी भेट, "मिलान" र "लिभरपूल"। पहिलो आधा मा इटालियन टोली, एकल लक्ष्य conceding छैन, ब्रिटिश को फाटक मा गोल तीन पटक। यो टोली कि देखिन्थ्यो Andriy Shevchenko एक प्रतिद्वन्द्वीको दिनुभएन। तर 45th देखि 60 औं मिनेट मा क्षेत्र मा के भयो, एउटा चमत्कार भन्दा अन्य नाम छैन। सरासर पहिलो आधा गुमाउने पछि लिभरपूल फिर्ता लड्न र तिनीहरूले जित्यो जो एक दण्ड सुटआउट, यसलाई ल्याउन सक्यौं।
सोभियत र रूसी राष्ट्रिय फुटबल टोली
रूसी फुटबल टोली को बलियो-इरादों विजय, दुर्भाग्य, त्यहाँ त अक्सर छन्। र यो समस्या सोभियत विगतमा गाडेको छ। तर त्यहाँ एउटा उज्यालो पृष्ठ हो!
उदाहरणका लागि, सम्झँदा ओलम्पिक खेल 1952 मा लामो-भूल। युगोस्लाभिया संग प्ले गरिएको सोभियत संघ राष्ट्रिय टीम को 1/8 फाइनल मा। 4: को 1st समय पछि हाम्रो yugam0गुमाए। को 2nd आधा को सुरुमा, अङ्क 1 थियो: 5, तर Vsevolod Bobrov र Vasily Trofimov सोभियत टीम को प्रयास 89th मिनेटमा scoreline बजाउनका लागि सही जित्यो।
पक्कै पनि, बलियो-इरादों विजय र रूसी टोली थिए। 2015 मा, रूस बेलारुस संग एउटा अनुकूल मिलान सञ्चालन। पहिलो 20 औं मिनेटमा रूस द्वारा खुलेको छ। तर त्यसपछि स्ट्राइकर कजान "Rubin" सर्गेई Kislyak दुई पटक गेट मा गोल गरेका थिए इगोर Akinfeev, तर अन्त मा रूसी टीम को खेलाडी बेलारुस को रक्षा मार्फत तोड्न तीन अधिक पल्ट व्यवस्थित। बलियो-इरादों विजय यो मामला मा गनिन्छ।
को युक्रेनी टोली
युक्रेन को टोली इच्छा को पहिलो विजय भिनियस मा मई 18, 1993 निश्चित छ। Lithuanians को 4th मिनेटमा रन खोलियो, र यूक्रेनियन 18 औं र 22 औं मिनेटमा मा गोल गरेका थिए। May 25, 1994 युक्रेन बेलारुस लिए। पहिलो आधा कुल0सँग समाप्त: 1, तर त्यसपछि यूक्रेनियन दोस्रो आधा3लक्ष्य स्कोर व्यवस्थित। सेप्टेम्बर 6, 1995 एउटा सरकारी मिलान मा, 1998 Mundialyu Lithuanians लागि चयन पनि पहिलो घरमा रन र 1st आधा जित्यो। यो वास्तवमा दोस्रो आधा यूक्रेनियन रोक्न थिएन लक्ष्य3बाल्टिक अमेरिका मा बल पठाउन। को Lithuanians भन्दा तेस्रो बलियो-इरादों विजय कीव 13 अगस्ट, 1996 मा पुग्यो। Viktor Leonenko को 45th मिनेटमा equalized (1: 1), र मिलान अन्ततः5समाप्त: युक्रेन पक्षमा 2।
तपाईं थाह छ, तपाईं सफल खेल सट्टेबाजी गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मूलतः, खेलाडीहरू पाहुनाहरूको वा होस्टहरूको विजय मा शर्त, लक्ष्य संख्या गोल आकर्षित। तर त्यहाँ अन्य विकल्प छन्। एक दर मा "बलियो-इरादों विजय" के हो? "Shakhtar" (डोनेट्स्क) जीत डायनेमो, तर पहिलो स्कोर Miners सुरक्षित कीव बलियो-इरादों विजय धारण गर्न सक्छन् - तपाईं मिलान "डायनेमो" (कीव) भनेर सोच्नुहुन्छ भने। खेल तरिका माथि छ भने, तपाईं जीत टिप्न सक्षम हुनेछ।
छ सधैं एक अद्भुत र रोमाञ्चकारी अमरीकी यो - फुटबल बलियो-इरादों विजय (यो के हो, हामी लेखमा समीक्षा)।
टर्की फुटबल खेलाडी halil Altıntop
अलेक्जेन्डर Elagin (टिप्पणीकारले): जीवनी
Dzho एलन - तारा वेल्स
Diniyar Bilyaletdinov: एक फुटबल खेलाडी को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
Carles Puyol - "बार्सिलोना" को स्थायी कप्तान
Oleg Vlasov: को मिडफिल्डर गरेको क्यारियर को मुख्य चरणमा
तेस्रो धर्मयुद्ध, उद्देश्य को सहभागीहरू
बढ्दो र शरद ऋतु गर्न वसन्त देखि लिली को खुवाउने
रहस्यमय प्राचीन मिश्र। कला र वास्तुकला - सम्बन्ध के हो?
सामान्य र रोग अवस्थामा मुटुको दर
जीवनी Kirill Lavrov, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
Pleurisy - यो के हो?
निजीकरण उद्यम स्वामित्व को प्रभावकारी सिस्टम को गठन अलग-अलग उद्यमीहरू
आधुनिक cartilaginous माछा मा पुरातन को सुविधाहरू सूची। आफ्नो सुविधाहरू
सफाई एडी लागि विद्युत मिसिन
अमेरिकी गायक र अभिनेत्री Mayli Sayrus: Filmography। Mayli Sayrus सबै चलचित्रहरू